NUG prepares to sign Rome statute to sue the military council in International Criminal Court – SaveMyanmar.today
There areanumber of routes to the ICC, being the party to the Rome statute is the most appropriate way. We are consulting with lawyers to sign the Rome statute,” U Moe Zaw Oo said.
Efforts are being made to seek the official recognition of the United Nations to NUG for the signing of the Rome statute.
According to article 11 of the Rome statute, ifastate becomesaparty to this statute, the court may exercise its jurisdiction.
The Court will have jurisdiction over crimes committed solely within the territory of the member state or inacountry that has accepted court proceedings.
According to the charter of the United Nations’ chapter 7, it isacriminal case referred to the International Criminal Court’s lawyers by the Security Council. Prosecutors can carry out their own investigation if the Security Council does not refer.
Only genocide, crimes against humanity and war crimes are heard by the court.
“We have prepared to charge the military council for crimes against humanity,” said U Thein Oo, the NUG’s minister of justice.
The first verdict of ICC took place in March 2012 when Thomas Lu-banger, Congolese militia leader, was sentenced to 14 years in prison for conscripting children under 15.
The first head of state brought to the ICC was former Ivory Coast president Laurent Gbagbo who was charged with murder, rape, sexual violence and inhumane acts in 2011.
The other known case is the prosecution of Kenya President Yudhoyono for crimes against humanity in the wake of the 2007-08 election. However, the court discontinued the case in December 2014.
စစ်ကောင်စီကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် တရားစွဲနိုင်ရန်အတွက် NUG က ရောမ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC တွင် တရားစွဲနိုင်ရေးအတွက် NUG အနေဖြင့် ရောမသဘောတူစာချုုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမိုးဇော်ဦးက ယနေ့ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
“ICC ကိုသွားဖို့ လမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ရောမသဘောတူစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့ တင်တာက အသင့်တော်ဆုံးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ ရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်နေပါတယ်” ဟု ဦးမိုးဇော်ဦးက ပြောသည်။
ထို့သို့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှုရရန်လည်း လိုအပ်သည့်အတွက်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောခဲ့သည်။
ရောမစာချုပ် အပိုဒ် ၁၁ တွင် အမျိုးသားနိုင်ငံတစ်ခုက ဤစာချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သွင်းမှု ပြီးမြောက်သည့်အခါမှ ICC ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် အမှုတစ်ခုကို တရားရုံးကိုင်တွယ်နိုင်ရေးအတွက် ရာဇဝတ်မှုသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား ကျူးလွန်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏နယ်မြေတွင် ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် တရားရုံး၏ တရားစီရင်မှုကို လက်ခံထားသည့် နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းတို့ဖြစ်ရမည်။
သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ် အခန်း ၇ အရ လုံခြုံရေးကောင်စီက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး တရားလိုရှေ့နေများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ရမည်။ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ညွှန်းဆိုမှုမရှိပါက တရားလိုရှေ့နေများအနေနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းမှုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုတို့ကိုသာ ယင်းတရားရုံးက ကြားနာစစ်ဆေးမှုပြုသည်။
“အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ တရားစွဲလို့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲကမှ စစ်ကောင်စီကိုတော့ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာ ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်တာနဲ့ စွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်” ဟု NUG ၏ တရားရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဦးကပြောသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ ပထမဆုံးအကြိမ် စီရင်ချက်ချမှတ်မှု ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ သောမတ်လူဘန်ဂါကို စစ်ပွဲအတွင်း ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
တရားရုံးသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ရာထူးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည် အိုင်ဗရီကို့စ်သမ္မတဟောင်း လောရန့်ဂတ်ဘိုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ လိင်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ လူသားမဆန်စွာပြုမူမှုများဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားသော လူသိများသည့်ဖြစ်စဉ်သည် ကင်ညာသမ္မတ ယူဟူရာကန်ယတာကို ၂၀၀၇-၀၈ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ပေါက်လာသည့် လူမျိုးစုအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့မှု ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အဆိုပါအမှုကို တရားရုံးက ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
Crd Burma Associated Press